मनोरञ्जनको कुरो Archives - नयाँ कुरो
एजेन्सी ।। साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने रक्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै तनाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको रक्तश्रावलाई प्राकृतिक रुपमा नै चाँडै समाप्त गर्न सकिन्छ । तर यहाँ जुन तरिकाबारे जानकारी दिइएको छ ती सु...
नयाँ कुरो समाचार । एलिना चौहानको रोमान्टिक गीत “क्या हिरो भएछ” सार्वजनिक गरिएको छ । भर्खरै मनोरञ्जनको दुनियामा प्रवेश गरेका गीतकार एवं निर्देशक विष्णु विक्रम निरौला आफ्नो चौथो गीत “क्या हिरो भएछ” बोलको गीत मेमोरी कार्डमै रहेको र मेमोरी कार्ड खराब भएकाले उक्त गीतको लिरिक भर्सनमा धनकुटा खवरको अफिसियल युट्युव च्यानल मार्फ...
‘इन्जिनिएर सापलाई आज तिते करेलीको अचार र लौकाको तरकारी’ भातको कुकरमा सिटी लगाउन समेत अल्छी लाग्ने मलाई अचार-तरकालीको स्वाद चखाउने ऊ नै त हो । आहा, कस्तो मिठो पकाउँछे घरबेटीकी छोरीले । अचार र तरकालीको कचौरा थोत्रो टेबुलमा राखेपछि मेरा आँखै अगाडि उसले मुख कुचुक्क पार्दै हात नचाई । सेतो दाद आएछ । मैले उसको दाहिने हात आ...
आमाले चप्पलले हिर्काएर घरबाट निकालेको आरोप लगाएपछी वलिउडबाट हराइन अमिसा
मुम्बई– बलिउड अभिनेत्री अमिषा पटेलले सन् २००० मा ऋतिक रोशनका साथ फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’बाट आफ्नो करियरको धमाकेदार सुरुवात गरिन् । यो फिल्मले बक्सअफिसमा आफूलाई हिट साबित गरेको थियो । उनको दोस्रो फिल्म ‘गदर एक प्रेम कथा’को सफलताले उनी फिल्म उद्योगको ठूलो स्टार नै बनिन् । यही बेला उनी र आफ्नो परिवारबीच खटपट भएको समाचा...
अरु जस्तै म पनि प्रेममा अन्धो थिएँ । समय नलगाई बनेको सम्बन्ध टुट्न समय लाग्दैन भन्ने पनि सुनेको थिएँ । आज साँच्चै सम्बन्ध टुटेको महशुस भएपछि विश्वास गर्न बाध्य भएको छु । बस् मात्र एक वर्षको हाम्रो सम्बन्ध थियो । हामी दुवै जना भर्खरका थियौं । दिमाग भर्खरको थियो र चौतर्फी प्रेम मौसमको लहर थियो । ललितपुर मछिन्द्रनाथ जा...
१८ असोज । नेपालको चर्चित टिभी कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट दिपाश्री निरौलालाई हटाईएको छ । उनको ठाउँमा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरलाई ल्याईएको छ । अब प्रसारण हुने एपिसोडमा दिपाश्रीको ठाउँमा दर्शकले करिश्मालाई देख्नेछन् । केही समय अघि दिपाश्रीले राजेश हमाल महानायक होईन भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा तान...
नयाँ कुरो समाचार ।। नेपाली सांगितक क्षाेत्रमा स्थापित गायिका मेलिना राइ तथा इत्र्जिनियर गायक विरेन्द्र श्रेष्ठको श्वर रहेको "जाले रुमाल" वोलको गित असोज १४ गते सार्बजनिक हुने भएको छ । एक पछी अर्को हिट गीतहरु पस्किरहेको इनाक्सी इनाक्छी इन्टरटेन्मेन्ट युट्युब च्यानलबाट गीत सार्बजनिक हुन लागेको हो । "जाले रुमाल" मा जुन...
प्रिय योङहाङ ।। बुद्धिमान तामाङको आवाजमा “मिलुङ झरनाको शिर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । योगेन्द्र योङहाङको शब्दमा तयार भएको गीत बुधबार सार्वजनिक भएको हो । अमर राईको संगीत रहेको यस गीत रणदिप भुजेलले एरेन्ज गरेका हुन् । उक्त गीत मलेशियामा रेकर्डिङ गरिएको हो । पाँचथर जिल्ला हिलिहाङ गाँउपालिका ३ र ४ को पुच्छर सिमानामा ...
पाँचथर १२ भाद्र ।। पाँचथरबाट ¥याप भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय रहेका ¥याप विधामा रहेको "मेरो कथा" बाेलको गित एलेक्स लामाको टिमले सार्बजनिक गरेको हो । गरिवीको पिडा र त्यसबाट सृजित समस्याले सहर पसेको युवाको कथा भिडियोले बोकेको छ । विशाल रसाइलिको निर्देशनमा तयार भएको भिडियो मिडिया कनेक्...
काठमाडाैँ ।। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका कारण दुई देशका ह्याकरबीच साइबर आक्रमणको होडबाजी चलिरहेको बेला दुई नेपाली नायिकाको नक्कली पोर्न भिडियो सार्वजनिक भएको छ। केही अघि बिबाह बन्धनमा बाँधिएका दुई नायिकाका एक पोर्न साइटमा फेक पोर्न भिडियो सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कलाक्षेत्रमा आतंक मच्चिएको छ। पोर्न कलाकारको शरीरमा...
माया गर्नु, प्रेम गर्नु वा मायाजालमा पर्नु आफैँमा अनौठो अनुभूति हो, जसको अनुभव माया गर्नेलाई वा मायाको जालमा पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। माया, प्रेम वा ‘लभ’ले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्र दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ। मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन्। मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा निम्न नौवटा फा...
प्रेमको त्यो बलिदान : रातो गुलाब दिएर प्रेमलाई प्रगाढ बनाउनेतर्फ रुपान्तरण ! शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६ काठमाडौं- विश्वभर फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि केही वर्षयता प्रेम दिवसलाई युवा युवतीले विशेष चाडकै रूपमा मनाउन थालेका छन् । यो दिवसले सहरी समाजमा त नयाँ संस्कृ...
गृहिणी भएकाले शनिवार मेरा लागि विशेष हुने गर्छन । हाट बजार जानु,तरकारी किन्नु,घर आएर भान्छाको काम गर्नु त्यसपछि लत्ताकपडा धुनु र घरको हेरचाह गर्नु आदी आदीले शनिवार व्यस्तातमै बित्ने गर्छन । यसै सन्दर्भमा माघ दोस्रो साताको शनिवारे सबै काम सकेर छोरीको प्रश्ताव अनुसार स– परिवार बजारको एउटा रेष्टुरेन्टमा खाना खान निस्कियौं...
गायक रामकृष्ण ढकाल र निलम शाह ढकालबीच सम्बन्ध बिच्छेद भएपनि दुवै एउटै घरमा बसिरहेको बताइएको छ । भैसेपाटीस्थित घरमा ढकाल र शाह छोरी रानी ढकालसँगै बस्नै आएका हुन् । बुधबार औपचारिक डिभोर्स भएपनि ढकाल र निलम सँगै बस्दै आएपछि धेरैको चासो बढेको छ । ढकाल केही समययता ऋणमा डुबेका थिए । ऋणबाट बच्न उनले डिभोर्स गरेर सम्पत्ति ज...
सुरु भयो नेपाल आइडल, के छन विशेषता ??
गायन रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल’को तेस्रो संस्करण यही बिहीबारदेखि एपी वान एचडी टेलिभिजनमा प्रसारण सुरु भएको छ । चार हजारभन्दा बढी प्रतियोगीबाट छानिएर करिब सय जना तेस्रो नेपाल आइडल बन्ने स्पर्धामा सहभागी भएका छन् । हिजोआज नेपाल आइडलका निर्देशकहरूलाई चटारो छ । बिहीबारबाट आइडलको तेस्रो संस्करण ‘अन एयर’ जाने हुँदा रियालिटी...
एजेन्सी, भारतीय टेलिभिजनको दुनियाँमा कमेडियन कपिल शर्मा सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । ‘दि कपिल शर्मा शो’ मार्फत दर्शकमाझ आइरहेका कपिलले गतबर्षको डिसेम्बरमा बिहे गरेका थिए । कपिलले गिन्नीसँग गतबर्षको डिसेम्बरमा बिहे गरेका हुन् । कपिल बिहे गरेको एक बर्षपछि बाबु बनेका हुन् । कपिल आफैले सामाजिक संजालबाट छोरीको जन्म भएको जानक...
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’ विरुद्ध उजुरी परेको छ । उक्त सिरियलका मुख्य पात्र जिग्री र पाँडे बिरुद्ध मिडिया हबका प्रमुख सोमप्रसाद धितालले उजुरी गरेका हुन् । धितालले आफ्नो हाँस्यटेलिश्रृंखला ‘भ्रद्रगोल’को पात्रहरु अर्को टेलिश्रृंखलामा प्रयोग गरेकाले आफूलाई समस्या परेको भन्दै प्र...
नयाँ कुरो समाचार ।। इन्जिनियरिङ लाइ मुल पेशा भएका विरेन्द्र श्रेष्ठ यतिबेला गीत संगीतको क्षेत्रमा समेत चम्किरहेका छन् । “पृथक” स्वर भएका श्रेष्ठले गाएका गीतहरुको म्युजिक भिडियोको समेत बजारमा चर्चा हुने गरेको छ । लोक पप गीत का कारण श्रोताको मन जितेका श्रेष्ठका थुप्रै गीतहरु विभिन्न अवार्डमा मनोनयनमा परिसकेका छन् भने...
म अफिसमा थिए श्रीमतिजी को माइत जाने दिन थियो फोन गरेर भनिन ‘म माइत हिडे आफ्नो ख्याल गर्नु’ । जब साझ घर पुगे टिभिमा एउटा पर्ची चिप्काइएको थियो जस्मा लेखिएको थियो । १. साथिहरुलाइ घर बोलाएर घरलाइ कवाड खाना बनाउने काम नगर्नु अगिल्लो पल्ट ४ वटा खाली बोतल सोफाको मुनि सफा गर्दा भेटेको थिए । २. खाना सकेसम्म घरमै बनाउनु अ...
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ ! चित्त बुझे एक शेयर गर्नुहोला पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ? समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारील...
बलिउड तथा फेसन दुनियाँका सुन्दरीहरुले मुम्बइको म्यारिट होटलमा आयोजित एक अवार्ड समारोहको रेड कार्पेटमा आफूलाई हट र आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरे । मुम्बइमा आयोजित ‘भोग ब्यूटी अवार्ड २०१९’मा बलिउडका अधिकांश सुन्दरीहरु उपस्थित थिए । तर, यो अवार्ड समारोहमा पुगेका अधिकांश बलिउड नायिकाहरुको अगाडि आइटम गल मलाइका अरोराको उपस्थि...
बलिउड नायक अक्षय कुमारले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा भिडियो सेयर गरेका छन् जसमा उनी मुम्बई मेट्रोमा यात्रा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । अक्षय कुमार यो आफ्नो यात्राको लागि निकै उत्साहित देखिएका छन् । भिडियोको क्याप्सनमा उनले लेखे, ‘आजका लागि मेरो राइड मुमबई मेट्रो । घाटकोपरदेखि वर्सोवासम्म ट्राफिकलाई पार गर्दै एउटा...
नयाँ कुरो समाचार ।। पाँचथरे बाल कलाकारहरु आयुष र अंशु गुरागाँइ समेतको अभिनय रहेको टंक बुडाथोकिको कसरी कसरी २ करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । गायक टंक बुडाथोकी र मेलिना राइको आवाजमा रहेको कसरी कसरी २, टिकटकमा देखेको बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरिएको छोटो समयमै १ करोड भन्दा धेरै पटक हेरिएको हो । उक्त भिडियोलाई दर्शक...
काठमाण्डौ ।। वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको निधन भएको छ । थुप्रै चर्चित नेपाली चलचित्रहरुमा अभिनय गरेकी अधिकारीको शनिबार निधन भएको हो । विक्रम सम्वत् २००३ सालमा काठमाडौँको असनमा जन्मेकी अधिकारीले कलाकारितामा नै आफ्नो जीवन अर्पण गरेकी थिइन् । उनले पाँच वर्षको उमेरमै सरस्वती सदन (क्याम्पस) मा शास्त्रीय नृत्य गरेकी थिइन्...
नयाँ कुरो समाचार ।। गायक टंक बुडाथोकी र मेलिना राइको आवाजमा रहेको कसरी कसरी २, टिकटकमा देखेको बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको १ घण्टा नबित्दै उक्त भिडियोलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका छन् । नयाँ नयाँ प्रतिभाहरु संग काम गर्दै आइरहेका टंकले यो पल्ट भने बालकलाकारहरु आयुष र अशुं गुराँगाइलाई उनको भ...
काठमाण्डौ ।। छविराज ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले दिएको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धानको लागी भन्दै निर्माता छविराज ओझा र नायिक शिल्पा पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दुई जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु...
जति धेरै सेक्स, उति बलियो मुटु ! तपाई कसैसँग नियमित यौन सम्पर्क राख्नु हुन्छ भने तपाईलाई मुटु रोग लाग्ने संभावना कम छ । नियमित रूपमा राखिने यौनसम्पर्कले मुटुलाई मजवुत बनाउने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । न्यू इन्ल्यान्ड इन्स्टिच्युटका बैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनअनुसार मुटु मजवुत बनाउन यौनसम्पर्कको महत्पूर्ण भूमीका रहन्छ ।...
पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा धेरै रुचाइएको लोकप्रिय कमेडि सिरियल भद्रगोलको श्रावण ३ गतेको अंक नआएपछी दर्शकहरुमा छटपटी बढेको छ । सदाझै सुक्रबार राती सिरियत अपलोड होला र हेरौला भनेर बसेका थुप्रै दर्शक सनिबार मध्यान सम्ममा समेत भद्रगोलको २ सय २० भाग हेर्न नपाँउदा निराश बनेका छन् । खास के कोरणले भद्रगोल आएन त ? भनेर हामीले...
काठमाण्डौ ।। नायिका शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको छ । यो भन्दा अगाडी छविको झापडले शिल्पाको कानमा समस्या भएको समाचारहरु आएका थिए । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा आज भएको दुवै पक्षको छलफलपछि पोखरेल र ओझाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि शिल्पाले श्रीमानबाट असुरक्षित...
पाँचथर ।। गायक तथा इन्जिनियर विरेन्द्र श्रेष्ठ र गायिका योजना पुरीको आवाज रहेको “आउन माया भेटौ न हाट बजारैमा” बोलको गित सार्बजनिक गरिएको छ । अम्बिका गुरुङको शब्द रहेको गीतमा दीपक शर्माको संगीत रहेको छ । दरबारको परिवेश भन्दा बाहिरको संसार नदेखेकी राजकुमारी (सृष्टि खड्का) जब हाट बजार हेर्न आफ्ना सुसारे हरु सहित पुग्छिन, ...